सुतेर चलचित्र हेर्न मन छ ? बुटवल जानुस – Rajmarg Online
सुतेर चलचित्र हेर्न मन छ ? बुटवल जानुस
क्युएफएक्स सिनेमाज’ बुटवलमा नयाँ चलचित्र मन्दिर (मल्टिप्लेक्स) सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुटवल–८ सुख्खानगरस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटको पाँचौ तलामा नयाँ ‘मल्टिप्लेक्स’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
उक्त सिनेमा हलमा रिगल सिनेमाज प्रालिको लगानी रहेको छ । सिनेमा हलमा सुतेर पनि चलचित्र हेर्ने मिल्ने ‘लग्जरियस’ सिटहरू रहेका रिगल सिनेमाज प्रालिका अध्यक्ष नकिम उद्धिनले बताए । सिनेमा हलमा ‘थिएटरमा डिप्थ क्यू थ्रि डि टेक्नोलोजी’ को प्रयोग गरिएको उद्धिनले जानकारी दिए ।
‘पछिल्लो समय बुटवलमा अत्याधुनिक र डिजिटल प्रविधिका मल्टिप्लेक्स खुल्ने क्रम बढेको छ’ उनले भने, ‘दर्शकको माग अनुसार तेस्रो शाखा बुटवलमा ल्याएका हौं । यो सिनेमा हल सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकापछि बुटवलका दर्शकहरुले पनि अब प्रविधियुक्त र स्तरीय सुविधा सहित फिल्म हेर्न पाउनेछन ।’ चलचित्र हलमा दुई वटा छुटटा छुटटै पर्दा रहेका छन् ।
एउटमा १ सय ९६ र अर्कोमा १ सय ७६ सिट क्षमता रहेको छ । रिगल सिनेमाजले बुटवलपछि बिराटनगर र भक्तपुरमा पनि नयाँ सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याउदै छ ।
तीन वटा हलमा गरी रिगलले ५० करोड रुपैयाँ चलचित्र हलमा लगानी गरिसकेको छ । चलचित्र हेर्न शुक्रबार शनिबार र सोमबार ३ सय ५० र अन्य बार २ सय ५० टिकट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । बिहानको ‘शो’ मा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ । क्यूएफएक्स सिनेमाजले नयाँ चेनमा आफ्नो मोबाइल एप पनि जारी राखेको छ ।
नयाँ मल्टिप्लेक्समा किचन सहितको फुड कोट मा ताजा खानाहरु पनि उपलब्ध हुनेछन । इन्टेरियर निकै आधुनिक र एलिग्रेस्ट रहेको छ । यो सँगै बुटवलमा चलचित्र हलहरु पाँच बटा पुगेका । चलचित्र पत्रकार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले दर्शकको चाहना र आधुनिकतासँगै सिनेमा हलहरु सुविधासम्पन्न र स्तरीय बन्न आवश्यक रहेको बताए ।